Meanings of ရ ရ ရကင်း ရကင်းသည် ရကစု ရကန် ရကား ရကောက် ရကောင်းစေ ရက္ခိုက်သ် ရက္ခိုသ် ရက် ရက် ရက် ရက် ရက်ကက် ရက်ကန်း ရက်ကန်းကြိုး ရက်ကန်းကြိုးမြွေ ရက်ကန်းခတ်
You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / ရ
"ရ" to "ရက်ကန်းခတ်"
ရ, ရ, ရကင်း, ရကင်းသည်, ရကစု, ရကန်, ရကား, ရကောက်, ရကောင်းစေ, ရက္ခိုက်သ်, ရက္ခိုသ်, ရက်, ရက်, ရက်, ရက်, ရက်ကက်, ရက်ကန်း, ရက်ကန်းကြိုး, ရက်ကန်းကြိုးမြွေ, ရက်ကန်းခတ်, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။
(အသံထွက်) (/ja./)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) verbal affix ရ ရ(part) အဓိပ္ပာယ်ထင်ရှားစေရန်၊ အလေးဂရုပြုမိစေရန်ကြိယာထောက်ပစ္စည်း။#: စီရရီ၊ ပြိုင်းရရိုင်း။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲများ=)
အင်္ဂလိပ်/Englishtwenty-seventh letter of the Myanmar alphabet.
အင်္ဂလိပ်/English1(a)get; obtain; have. /2captuer. / be married.(part)1 particle suffixed to verbs and collocating with the postpostitional marker မည်; သည် or the particle မ to convey an imperative mood. /2particle suffixed to verbs to denoteacertain capability or utility. / particle suffixed toaverb denoting affirmation of some action or occurrence. / particle suffixed to nouns as emphasis or to verbs for assonance.
(အသံထွက်) (/jagin: dhe/)(ရင်းမြစ်) common noun ရကင်းသည် ရကင်း(n)+အသည် - သည်(n) archaic# အတီးအမှုတ်သဘင်သည်၊#: ပုဂံခေတ်တူရိယာသမားကိုရကင်းသည်ဟုခေါ်သည်။(=အရေအတွက်=) ဦး၊ ယောက်။(=က
(အသံထွက်) (/ja. gazu./)(ရင်းမြစ်) (my-adv) adverb of condition ရကစု ရကစု(adv) obsolete# မသေမသပ်၊ ဖြစ်သလို၊ ဆင်ခြင်ပိုင်းခြားမှုမရှိဘဲ ရတတ်သမျှအားဖြင့်။#: ဗိုင်းစချည်စ၊ ရကစုထားသကဲ့သို့။
အင်္ဂလိပ်/Englishstored away odds and ends.(adj)any available.(adv)in disarray; haphazardly.
(အသံထွက်) (/jagan/)(ရင်းမြစ်) common noun ရကန် ရကန်(n) ကာရန်ကိုကန်၍စာဆိုပြိုင်ဘက်ကို နှိမ်နင်းကန်ကျောက် စပ်ဆိုလေ့ရှိသော ကဗျာတစ်မျိုး။#: မွေ့နွန်းရကန်။(=အရေအတွက်=) ပုဒ
အင်္ဂလိပ်/Englishkind of satirical poem.
(အသံထွက်) (/ja. ga:/)(ရင်းမြစ်) (သမ္ဗန္ဓ) (my-conj) indicating cause ရကား ရကား(conj) အကြောင်းပြအနက်ဖြင့်ဆက်စပ်ပေးသောစကားလုံး။ သောကြောင့်။ သည့်အတွက်။#: နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုရကား။(=အ
အင်္ဂလိပ်/Englishas; since; because; in as much as.
(အသံထွက်) (/ja gaú/)(ရင်းမြစ်) proprer noun ရကောက် ရ(n)+ကောက်(adj) ရအက္ခရာ၏အမည်။#: တဝမ်းပူအောက်ကယ်ကရကောက်ကယ်ခွေယောင်။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲများ=) ရ;(n)
အင်္ဂလိပ်/Englishname of the twenty-seventh letter of the Myanmar alphabet.
(အသံထွက်) (/ja. gaun: zei/)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) verb affix ရကောင်းစေ ရ(v)+ကောင်း(part)+စေ(part) informal# အခွင့်အရေးတစ်စုံတစ်ရာရမှစေတော့ဟူသောအနက်ဖြင့်ကြိယာနောက်မှကပ်၍သုံးသောစကားလုံး။#: သွားရကောင်းစေ။ စ
အင်္ဂလိပ်/Englishhave in mind; intend.(part)particle suffixed toaverb to convey the sense of gettingachance to do sth.
(အသံထွက်) (/jékhaí/)(ရင်းမြစ်) ရက္ခသ common noun ရက္ခိုက် Pali-ရက္ခသ - ရက္ခိုသ်(n) ဥစ္စာ၊ ရေကန်စသည်ကိုစောင့်ရှောက်သောနတ်တစ်မျိုး။#: ရက္ခိုသ်ဘီလူးစောင့်၍နေသော။ စာဏာကျ၊ ပ။ ၄။(
(အသံထွက်) (/jé/)(ရင်းမြစ်) common noun ရက် ရက်(n) archaic# (ပန်းပွင့်စသည်မှထုတ်ယူ၍ရသော)အရည်။ ပန်းဝတ်ရည်။#: ရွှေကြာရက်ကို၊ စုံမက်ဝမ်းတွင်၊ သောက်ကြချင်သော်။ ဂါထာ ၇၄။(=အရေအတွက်=)
အင်္ဂလိပ်/Englishbold; swift; or decisive(of action)(usually used in replicated form).(part)particle suffixed toaverb to denote lack of consideration.
အင်္ဂလိပ်/Englishliquid(extracted; such as nectar).
(အသံထွက်) (/jéke ´/)(ရင်းမြစ်) Eng-racket common noun ရက်ကက် Eng-rocket - ရက်ကက်(n) ကြက်တောင်၊ သက္ကလတ်ဘောလုံးငယ်စသည်ကိုရိုက်ပုိ့ကစားရသည့်လက်ကိုင်တပ်ထားသောဘဲဥပုံသစ်သားခွေတွင်နိုင
အင်္ဂလိပ်/Englishracquet; racket(tennis or badminton). [Eng racket]
(အသံထွက်) (/jé kan ׃/)(ရင်းမြစ်) common noun ရက်ကန်း ရက်ကန်း(n) အဝတ်အထည်ရက်လုပ်သောလုပ်ငန်း အတတ်ပညာ။#: ယောက်ျားစာမတတ်လျှင်အကန်း၊ မိန်းမရက်ကန်းမတတ်လျှင်အကျိုး။ [ဆိုရိုး](=အ
(အသံထွက်) (/jé kan ׃ gjou ׃/)(ရင်းမြစ်) compound noun ရက်ကန်းကြိုး ရက်ကန်း(n)+ကြိုး(n) ကိုယ်လုံးသေးငယ်၍ရှည်သောအစိမ်းရောင်‌ြေမွငယ်။#: သေးငယ်သောရက်ကန်းကြိုးခေါ်သောမြွေ။ မြွေ။
(အသံထွက်) (/jé kan ׃ gjou ׃ mwie/)(ရင်းမြစ်) compound noun ‌ြေမွ ရက်ကန်း(n)+ကြိုး(n)+‌ြေမွ(n) ကိုယ်လုံးသေး၍ရှည်သောအစိမ်းရောင်မြွေငယ်။#: ရက်ကန်းကြိုးမြွေ။ ယု။ ၈၂၉။(=အရေအတွ
အင်္ဂလိပ်/Englishlong; thin; green arboreal snake; usually found living inagroup.
(အသံထွက်) (/jé kan ׃ khá/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ခတ် ရက်ကန်း(n)+ခတ်(v) ရက်ကန်းစင်၌(လက်ခတ်ကိုဆွဲငင်၍)အထည်ရက်သည်။#: ရက်ကန်းခတ်သကဲ့သို့ဓားကိုကျောက်ပေါ်တင်ပြီးရှေ့နှင့်နောက်အ
အင်္ဂလိပ်/Englishweave(onaloom).